Tsy Natahotra ny Zanak’anabavin’i Paoly | Ampianaro ny Zanakao
Tsy Natahotra ny Zanak’anabavin’i Paoly
Andeha isika hianatra momba ny ankizilahy iray, izay nanavotra ny dadatoany. I Paoly io dadatoany io. Tsy haintsika ny anaran’ilay ankizilahy, fa fantatsika hoe tena tsy natahotra izy. Tianao ho fantatra ve izay nataony?...
Nigadra tany Jerosalema i Paoly tamin’izay, satria nitory momba an’i Jesosy. Nisy olona nanao teti-dratsy hamonoana an’i Paoly anefa. Hoy izy ireo: ‘Andao horesahintsika ny lehiben’ny miaramila mba haniraka miaramila hitondra an’i Paoly any amin’ny fitsarana. Hiafina eny an-dalana isika, ka rehefa mandalo eo i Paoly dia hovonointsika.’
Noresahin’io ankizilahy io tamin’i Paoly sy ny lehiben’ny miaramila ilay teti-dratsy
Henon’ny zanak’anabavin’i Paoly ilay tetika. Inona no nataony? Nankany am-pigadrana izy ary niresaka tamin’i Paoly. Tonga dia nasain’i Paoly noresahiny tamin’ny lehiben’ny miaramila ilay izy. Sarotra tamin’io ankizilahy io ve ny niresaka tamin’ilay lehiben’ny miaramila?... Ie, satria olona ambony ny lehiben’ny miaramila. Niresaka taminy anefa ilay ankizilahy fa tsy natahotra.
Nahita hevitra ilay lehiben’ny miaramila. Naka miaramila efa ho 500 izy mba hiaro an’i Paoly. Nasainy nentin’izy ireo tany Kaisaria i Paoly tamin’io alina io. Tsy maty tokoa ve i Paoly?... Ie. Tsy afaka namono an’i Paoly ireo olon-dratsy. Tsy nahomby ny tetik’izy ireo.
Inona no ianaranao avy amin’io tantara io?... Tokony hanahaka an’ilay zanak’anabavin’i Paoly ianao, ka tsy hatahotra. Tsy tokony hatahotra ianao rehefa miresaka momba an’i Jehovah. Hiresaka momba an’i Jehovah foana ve ianao fa tsy hatahotra?... Mety hamonjy ny olona tsy ho faty ianao raha manao izany.
Saika hataon’ny olona ahoana i Paoly?
Inona no nataon’ilay zanak’anabavin’i Paoly? Nahoana no sarotra ny miresaka amin’ny lehiben’ny miaramila?
Inona no ianaranao avy amin’ny zanak’anabavin’i Paoly?
Hizara Hizara Tsy Natahotra ny Zanak’anabavin’i Paoly